Filtrer les éléments par date : mardi, 19 janvier 2021
mardi, 19 janvier 2021 18:35
Eloise : A Antalaha
A 15 heures, heure locale, ELOISE est positionnée à 39 Km à l’Est de Cap Est. Toujours au stade de Forte tempête tropicale, le vent moyen est estimé à 100 Km/h, avec des rafales de 140 Km/h autour de son centre. Elle se déplace vers le Sud-Ouest à 17 Km/h. Un atterrissage sur Masoala est attendu d'ici quelques temps. Les avis d’alerte lancés restent en vigueur :
mardi, 19 janvier 2021 18:21
Eloise : Hiditra an'Antalaha
Tany amin’ny 39 Km Atsinanan’ny Cap Est no nisy ny foiben’i ELOISE tamin’ny 03 ora tolakandro teo. Niakatra ho 100 Km/ora ny rivotra entiny, ary arahina tafiotra 140 Km/ora manodidina ny foibeny. Mizotra mianatsimo andrefana ny diany ka mahafaka 17 Km/ora. Hiditra an-tanety ao amin’ny distrikan’Antalaha izy tsy ho ela.
Mbola manan-kery ny filazana fampitandremana ho an’ireto faritra sy Distrika manaraka ireto :
Filazana Loza mitatao (Filazana miloko Mena) : Sava, Analanjirofo, Bealanana, Befandriana Avaratra ary Mandritsara.
Filazana Loza manambana (Filazana miloko Mavo) : Toamasina I-II sy ALAOTRA.
Filazana fanairana (Filazana miloko Maitso): Brickaville, Vatomandry, Mahanoro ary Moramanga.
(Loharano Météo Madagascar)
mardi, 19 janvier 2021 17:59
Antsiranana : Naiditra am-ponja ilay jeneraly sandoka
Voasambotra tao Antsiranana ny 13 janoary 2021 ny tovolahy iray 31 taona mampiasa ny kaonty Facebook "Xavier Rakotoson" noho ny fisolokiana sy fisandohana nataony.
Niara-nientana ny Sampan-draharaha miady amin’ny fandikan-dalàna an’habaka sy ny Sampana miady amin’ny heloka bevava ao Antsiranana ary ny Vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimaria Amoron’i Mania.
Nampiasa ny sarina Jeneraly, sekreteram-panjakana miadidy ny Zandariamaria tany aloha ity kaonty ity. Taty aoriana dia nosoloiny sarina manamboninahitra Jeneraly hafa indray io. Ny sarin’ny Jeneraly, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria ankehitriny no nampiasainy farany, izao izy voasambotra izao.
Kapoaka manaram-penitra : Hamboarina any Toamasina
Orinasa lehibe iray any Toamasina no fantatra fa nomena ny tolotra amin’ny fanamboarana ilay kapoaka famaram-bary manaram-penitra (réglémenté) kasain’ny fitondrana haparitaka eto Madagasikara amin’ny alalan’ny minisiteran’ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana.
Mety misy fifandraisany amin’izany angamba ny anton-dian’ny filoha Andry Rajoelina any an-toerana amin’ity herinandro ity.
Namana akaikin’ny tomponandraikitra ambony no tompon’ny orinasa nomena ny tolotra.
Niala maina kosa ireo mpisehatra madinika efa havanana amin’izany ao Antananarivo sy any amin’ny toeran-kafa.
Kinga amin’ny fanitsiana ireny fitaovam-pandrefesana toy ny mizàna tsy lany fitsaràna sy ny famoronana azy ireny ny mpisehatra madinika.
Niroso tamin’ny fandaniana ny fitsipika anatiny ireo Loholon’i Madagasikara nandritra ny fivoriana voalohany androany.
Nisy ny fanovàna natao, ka toy izao no nandrafetan’izy ireo ny Birao maharitra sy ny vaomiera eo anivon’ny Antenimierandoholona :
- Mikasika ny birao maharitra:
Telo no Filoha lefitry ny Antenimierandoholona ka ireto avy izany:
1. Filoha lefitra misolo tena ireo faritany avy any avaratra
2. Filoha lefitra misolo tena ireo faritany avy any atsimo
3. Filoha lefitra avy amin’ ireo mpanohitra
Jiolahy mpanao sy mpisera vola sandoka miisa 6 sy ramatoa roa no voasambotry zandary tao antampon-tanàn'i Toamasina ny 18 janoary 2021.
Efa amam-bolana maro no niasan’ity tambazotran-jiolahy mpanao sy manaparitaka vola sandoka ity tamin'iny faritra Antsinanana iny vao izao sarona izao.
Teo Barikadimy no sarona ny iray tamin'ireo jiolahy niaraka tamin'ny lelavola sandoka 20 000 Ariary miisa 750 izay mitotaly 15 000 000 Ariary. Taorian'ny famotorana azy no nanaborahany ireo mpiray tambazotra aminy, ka vehivavy roa sy jiolahy dimy hafa no voasambotra tsirairay tamin'ny toerana samihafa tao Toamasina.
Anatin’ny famotorana azy ireo ny Zandarimaria amin’izao.
Nisy fanafihan-dahalo nitranga tao Tarandy Kaominina ambonivohitra Amboasary Atsimo omaly Alatsinainy 18 janoary 2021. Nidina ifotony avy hatrany ny Polisy ao Amboasary Atsimo vao nahazo antso avy amin'ny Fokonolona. Dahalo anefa no nitsena sy nanao tifitra variraraka azy ireo.
Polisy roa no naratra mafy vokatr'izay, ka ny iray voan'ny bala teo ambanin'ny fony, ary ny iray hafa kosa dia nivoaka teo amin'ny lamosiny ny bala.
Tonga tany an-toerana ny Minisitry ny fiarovam-pirenena sy ny Minisitry ny filaminam-bahoaka nijery sy nikarakara ireo Polisy naratra, ary nanome baiko hisambotra faran'izay malaky ireo dahalo ireo.
Taorian'ny Latsa-bato miafina natao dia lany ho Filohan'ny Antenimierandoholona ny Loholona Razafimahefa Herimanana.
Tsy nisy mpifaninana taminy fa kandida tokana narotsaky ny IRMAR izy.
Loholona voafidy tato amin'ny faritany Antananarivo Razafimahefa Herimanana. Sekretera jeneraly tao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny andraikitra farany notanany.
Teo amin'ny lafiny politika dia mpikambana tao amin'ny antoko Grad Iloafo izy. Tao amin'ny vovonana ESCOPOL tamin'ny tetezamita. Mpikambana tao amin'ny CST (Conseil supérieur de la transition). Lasa mpikambana TGV.
Izy no Filoha faha10 hitondra ity andrimpanjakana mpanao lalàna ity, handimby toerana an'i Rakotovao Rivo.
Nanao veloma ireo Loholon’i Madagasikara izay notarihin’Atoa Rivo Rakotovao ny alatsinainy 18 janoary 2021 ny mpiasa eo anivon’ny Antenimierandoholona. Nitarika izany Ramatoa Robline, Sekretera Jeneralin’ny Antenimierandoholona.
Nisaotra sy nankasitraka ireo Loholon’i Madagasikara ireo tamin’ny zavatra nataon’izy ireo, ity farany. Noho ny fijoroan’izy ireo hoy izy no nahafahana niaro ny Andrimpanjakana.
Ny Filohan’ny Antenimierandoholona tetsy ankilany dia nankasitraka ny fiaraha-miasa nisy teo amin’ny mpiasa sy ny Loholon’i Madagasikara ary nanentana ny mpiasa rehetra izy mba hanao ny tsaratsara kokoa amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo Loholon’i Madagasikara vaovao.